BUDDHIST TERMS' Dictionary: PSYCHIC LIFE - အရူပဇီဝိတိန္ဒြိယ
PSYCHIC LIFE - အရူပဇီဝိတိန္ဒြိယ
PSYCHIC LIFE Arῡpa jῑvitindriya
အရူပဇီဝိတိန္ဒြိယ - နာမ်ဇီဝိတိနြေ္ဒ၊ နာမ်သက် ဇီဝိတိနြေ္ဒစေတသိက်။
သတ္တ၀ါတစ်ဦးတွင် ရုပ်သက်, နာမ်သက်ဟူ၍ အသက်နှစ်မျိုးရှိသည်။ နာမ်ဇီဝိတိနြေ္ဒသည် ၎င်းနှင့်အတူ ယှဉ်၍ ဖြစ်ကြသော စိတ်, စေတသိက်တို့ကို သက်တမ်းပြည့် တည်တံ့အောင် စောင့်ထိန်းပေးသော နာမ်သက်ဖြစ်သည်။
Faculty of mental life
Inabeing, there are the faculty of physical or material life, rῡpa jῑvitindriya and the psychic life, nᾱma jῑvitindriya. Psychic life is the vitalizing principle which safeguards life of the mental concomitants which arise together with it. The mental states are sustained by this vitalizing principle through out one’s life-span.